ထိပ်တန်းရောက်နေသူ အများစုဟာ မတရား အမြတ်ကြီးစားကာ အခွန်တိမ်းရှောင်ချင်တဲ့ လူတွေ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ထိပ်တန်းရောက်နေသူ အများစုဟာ မတရား အမြတ်ကြီးစားကာ အခွန်တိမ်းရှောင်ချင်တဲ့ လူတွေ
မြန်မာ့ စီးပွားရေး လောကမှာ ထိပ်တန်းရောက်နေသူ အများစုဟာ မတရား အမြတ်ကြီးစားကာ အခွန်တိမ်းရှောင်ချင်တဲ့ လူတွေများ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီလို ဖြစ်ပွားအောင် အဓိက အကူအညီ ပေးသွားတဲ့ လူများကတော့ အစိုးရ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ သူတို့ နိူဝင်ဘာလ 26 ရက် 2012 ခုနှစ်က Black List အဖြစ်က ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တဲ့ အမည်စာရင်းက သက်သေပြနေပါတယ် ။
ဥပဒေချိုးဖောက်သူများကို တရားဝင် အပြစ်ပေး အရေးယူခြင်း အလျှင်းမရှိဘဲ ကုမ္ပဏီအမည်ကိုသာ Black List အဖြစ် ကြော်ငြာတဲ့ အတွက် အဲဒီလူတွေဟာ နောက်ကုမ္ပဏီတခု ပြောင်းဖွင့် ခဲ့ ကြလို့ အမည်ပျက်စာရင်းတော်တော်များများမှာ Company အမည်သာ ကွဲပြားသွားပြီး လူနံမည်နဲ့ မှတ်ပုံနံပါတ်တွေက တော်တော်များများ သွားတူနေတာတွေ့ ရမှာပါ ။
တချို့ ဆို ကုမ္ပဏီ တခု Black List သွင်းလိုက်ရင် နောက်တခု ပြောင်းဖွင့် ရင်းက လုပ်ငန်းတမျိုးတည်း အတွက် ကုမ္ပဏီ ( ၇ ) ခုလောက်ထိကို တစ်ယောက်တည်း ဖွင့် လှစ်ခဲ့ ကြောင်းတွေ့ ရပါတယ် ။
ဒါတွေကို အစိုးရဟာ သိသိကြီးနဲ့ လဘ်စားကာ အရေးယူခြင်း အလျှင်းမရှိခဲ့ တဲ့ အပြင် လူပုဂ္ဂိုလ် ၅၈၇ ဦး ကို အမည်ပျက် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ သည်ဟု ရူးချင်ယောင်ဆောင်ကာ လူအရေအတွက် အရှက်မဲ့ စွာ လိမ်ညာပြီး ကြော်ငြာခဲ့ ပါတယ် ။
This entry was posted on January 16, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မုစ်လင်မ် သူငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးပြု၍ ဤစစ်တမ်း(Survey) ကို ဖြေပေးပါ။
Jummah Ka Din Kitna Afzal Hai: →